Engineer Mudzuri Vanoti MDC Ichaongorora Vari Kukonzera Mhirizhonga Mubato
Mbudzi 19, 2007
Bato reMDC rapindwa nerushambwa rusati rwamboonekwa munhoroondo yebato iri. Dzimwe nhengo dze MDC inotungamirwa naVa Morgan Tsvangirai, idzo dziri kufungidzirwa kuti dziri kutsigira Amai Lucia Matibenga, dzinoti dziri kurambidzwa kusvika pamuzinda webato iri muHarare. Sekutaura kuri kuita mutori wedu wenhau, Thomas Chiripasi, vanenge vaenda kumuzinda uyu, vari kudzingwa kana kurohwa, sezvakaitika mukupera kwesvondo.
Asi munyori anoonz nezve kufambiswa kwemabasa ezve matongerwo enyika mubato iri, Engineer Elias Mudzuri, vanoti bato ravo riri kuongorora nyaya dzekurohwa kwevanhu vanonzi vaitsigira Mai Matibenga pa Harvest Harvest, pamwe nekurohwa kwevatori venhau vaviri.
Mutori wenhau weStudio 7 Carole Gombakomba aita hurukururo naEngineer Mudzuri kuti vatsanangure zviri kuitika mubato ravo.
Mamwe mashoko atiri kutambira kubva kune dzimwe nhengo dzebato iri, anotiwo vechidiki vari kukonzera nyonga nyonga iyi, vari kutsigirwa kana kutumwa naMai Theresa Makone, kuti varwise vatsigiri VaMai Matibenga.
Studio 7 yakundikana kubata Mai Makone, kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi.
Carole Gombakomba weStudio7 aita zvakare hurukuro naVa Pedzisai Ruhanya, avo vanoongorora nezvematongerwo enyika, uye vari Senior Programs Officer muCrisis in Zimbabwe Coalition, kuti tinzwewo pfungwa dzavo pane zviri kuitika izvi.
Dzimwe Nhau Kubva ku Studio7...